वर्ष २०६६ मा अस्ताएका व्यक्तित्वहरू | अग्निबाँण, समाचार र बिचारको अग्नि
← सत्ताको वरिपरि घुमेको वर्ष २०६६	०६७ मा ९२ दिन सार्वजनिक बिदा →	वर्ष २०६६ मा अस्ताएका व्यक्तित्वहरू	14
वर्षको अन्त्यमा नेपाली जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो । लोकतन्त्र स्थापना एवं पुनःस्थापनाका लागि साढे छ दशक बिताएका संघर्षका नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ८६ वर्षको उमेरमा देह त्याग गरे । उनको निधनबाट संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको नेपालमा अब के हुने हो भन्ने चिन्ता बढेको छ । उनले दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर गरेका कार्यहरू भावी पुस्ताका नेताहरूका लागि उदाहरण बनेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली राजनीतिका महानायक एवं राजनैतिक क्षेत्रका अनुभवी अभिभावक थिए । उनको देहावसानले एक प्रकारको रिक्तता पैदा गरेको छ । उनी पदीय हिसाबले नेपाली कांग्रेसका सभापति थिए तर केही वर्षयता उनले देखाएको उदार व्यवहारबाट उनी एक संस्थाकै रूपमा स्थापित भए । वर्तमान नेपाली राजनीतिमा उनीबराबरको छबि भएको दोस्रो नेताको अभाव छ । विपक्षीलाई पनि सँगै मिलाएर लान सक्ने खुबीका कारण उनी जनतामाझ सदैव आशाका केन्द्र थिए ।नेपाली समाजमा बाँचुन्जेल कसैलाई पर्याप्त सम्मान दिइँदैन । मृत्युपछि भने अनावश्यक ढङ्गले जानेसम्मका शब्दजलप लगाएर प्रशंसा गरिन्छ । कोइरालाको अवसानपछि पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको देख्न पाइयो । कोइरालामा पनि केही अवगुण पक्कै थिए । कुनै पनि मानिस गुणैगुणले सम्पन्न हुन सक्दैन । सबैमा केही न केही अवगुण हुन्छ । उनी बाँचुन्जेल विभिन्न हिसाबले उनलाई तल पारेर कुरा गर्नेहरू प्रशस्त भेटिन्थे । तिनै व्यक्तिहरू अवसानपछि प्रशंसा गर्नेमा एक नम्बरमा देखा परे । यस्तो प्रवृत्तिले कुनै पनि व्यक्तिको सही मूल्याङ्कन एवं कदर हुन सक्तैन । जे होस्, कोइरालाको अवसानले नेपाली राजनैतिक क्षेत्रमा अपुरणीय क्षति भने पुर्यायो ।
नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिबाट उदाएकी एवं पछिल्लो समयमा करिब-करिब राजनीतिक सहिद बनेकी शैलजा आचार्यले पनि जेठ महिनामा धर्तीबाट बिदा लिइन् । ६७ वर्षकै उमेरमा संसारबाट असामयिक बिदा लिएकी अविवाहित आचार्य नेपाली काङ्ग्रेसमा एक्ली बृहस्पतिका रूपमा चिनित्थिन् । बीपी कोइरालाबाट राजनीति सिकेकी शैलजा उनीबाट प्रशंसित थिइन् । मूल्य मान्यता एवं आदर्शको राजनीति गर्ने शैलजाले योगदानअनुरूप चर्चा पाउन सकिनन् । पदीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्ने शैलजा उदाहरणीय नेतृ थिइन् ।
वरिष्ठ उद्योगी महेन्द्र गोल्छाको ५३ वर्षको उमेरमै असामयिक निधन भयो । फोक्सोको क्यान्सरको उपचार गर्ने क्रममा मंसिर महिनामा उनले धर्तीबाट बिदा लिएका हुन् । पूर्वाञ्चल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य उनी विभिन्न संस्थासँग आबद्ध थिए । गोल्छा अर्गनाइजेसनमा आबद्ध रहेर व्यापार कार्यमा संलग्न उनी महेन्द्र गोल्छा समाजसेवी थिए । विभिन्न सामाजिक संस्थामा रहेर समाजसेवाको क्षेत्रमा उनले पुर्याएको योगदान सराहनीय छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ का संयोजक तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अर्यालको देहावसान असोज महिनामा ७२ वर्षको उमेरमा भयो । अदालतमा रहँदा तथा अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने बेलामा अर्यालले पुर्याएको योगदान विशिष्ट छ । कानुनका विशद् ज्ञाता अर्यालको योगदान सदैव स्मरणीय रहने छ ।
०६२/०६३ को जनआन्दोलनका जिउँदा सहिद विष्णुलाल महर्जनले पुस महिनामा भौतिक शरीरबाट बिदा लिए । १८ पुसमा देहत्याग गरेका महर्जनको १९ गते राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिएको थियो । अन्त्येष्टिअघि उनको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय झन्डा ओढाएका थिए । ०६३ को जनआन्दोलनमा उनले देखाएको बहादुरी प्रशंसनीय छ ।
मंसिर महिनामा राप्रपा उपाध्यक्ष जोगमेहर श्रेष्ठको ८४ वर्षको उमेरमा निधन भयो । पिसाबमा समस्या देखिएकाले बी एन्ड बी अस्पतालमा उपचाररत अवस्थामै उनको निधन भएको हो । पञ्चायतकालमा पटक-पटक मन्त्री भएका श्रेष्ठ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा सत्ता लिनुभन्दा पहिले माघ १९ अघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधारमन्त्री भएका थिए । उनले लामो समय राजनीतिमा लागेर देशका लागि दिएको योगदान महत्त्वपूर्ण छ ।
पुस महिनामा समाजशास्त्री सौभाग्यजंग शाहको ४८ वर्षकै उमेरमा असामयिक निधन भयो । समाजशास्त्रको गहिरो ज्ञान राख्ने शाहले अनेकौं पुस्तक पनि लेखेका छन् । उनले यसका अतिरिक्त नेपाली समाजका अनेकौं अध्ययन गरेर राष्ट्रलाई गुन लगाएका छन् ।
विदेशमा व्यावसायिक फुटबल खेल्ने पहिलो नेपाली नरेन्द्रमान सिंह मंसिर महिनामा अस्ताए । ५२ वर्षको उमेरमै जन्डिस लागेर असामयिक निधन बेहोरेका नरेन्द्रले आफ्नो कर्मथलो भारतको मुम्बईलाई बनाएका थिए । फुटबल खेलेर टेबहालमा घर किन्न सफल उनी नेपाली खेलकुद क्षेत्रका उदाहरण हुन् । सन् १९८२ को राष्ट्रिय टिमका खेलाडी सिंह स्ट्राइकर एवं प्लेमेकर थिए । संकटा क्लबलाई वि.संं. २०३५ सालमा त्रिभुवन च्यालेन्ज सिल्ड जिताउन उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । पछिल्लो समयमा उनी प्रशिक्षकका रूपमा कार्यरत थिए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता टेकबहादुर चोख्यालले पनि ५९ वर्षमै जीवन छाडे । कांग्रेस राजनीतिमा लागेर देश र समाजका लागि काम गरेका चोख्यालको मंसिर महिनमा निधन भएको हो ।
वासु रिमाल ँयात्री’
पत्रकार एवं साहित्यकार वासु रिमाल यात्रीले साउन महिनामा ६९ वर्षकै उमेरमा देह त्याग गरे । उनी उच्च रक्तचापबाट पीडित थिए । निकै लामो समयसम्म राससमा कार्यरत यात्रीले प्रशस्त साहित्यिक पुस्तक निकालेका छन् ।
के. वी. शाही
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री के. वी. शाहीको ७९ वर्षको उमेरमा असार महिनामा हृदयाघातबाट निधन भयो । उनी २०३६ देखि २०३८ सम्म नेपालका परराष्ट्रमन्त्री थिए ।
५८ वषर्ीय जोसिला नेता उमाकान्त हमाल हिंसाको राजनीतिका सिकार बने । नेपाली कांग्रेस हुम्लाका नेता एवं महासमिति सदस्य हमालको अपहरणपछि हत्या गरिएको थियो । विकट जिल्लाका जनताका पक्षमा कार्य गर्ने उनी नृशंस मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । देश र जनताका पक्षमा लागेका हमालको योगदान हुम्लाका लागि वरदान साबित हुनसक्थ्यो तर उनको हत्या भएपछि राष्ट्रले यो अवसर पाउन सकेन ।
← सत्ताको वरिपरि घुमेको वर्ष २०६६	०६७ मा ९२ दिन सार्वजनिक बिदा →	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...